National Democratic Front - NDF (Burma): အမျိုးသားဒီမိုကရေစီတပ်ပေါင်းစု (မဒတ) ဗဟိုသဘာပတိ အစည်းအဝေး ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီတပ်ပေါင်းစု (မဒတ) ဗဟိုသဘာပတိ အစည်းအဝေး ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်
ရက်စွဲ ၊ ၊ ၂၆ ရက် ဧပြီ်လ ၂၀၁၀ ခုနှစ်၊ ကြေညာချက်အမှတ် - ၀၈။၀၆။ဦးစီး-၁၀၊
၁၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီတပ်ပေါင်းစု - မဒတ သတ္တမအကြိမ်ညီလာခံသက်တမ်း၊ ဗဟိုသဘာပတိ အစည်းအဝေးကို ဧပြီလ ၂၃ ရက်မှ ၂၄ ရက်ထိ နှစ်ရက်တိုင်တိုင် နိုင်ငံရေးအကြပ်အတည်း မြင့်မားနေသော အရေးကြီးသည့်အချိန်ကာလတွင် လွတ်မြောက်ဒေသတနေရာ အောင်မြင်စွာကျင်းပပြီးစီးခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးကြီးသို့ မဒတ တပ်ပေါင်းစုအဖွဲ့ဝင် (၈) ဖွဲ့ ရှိသည့်အနက် (၇) ဖွဲ့မှ ဗဟိုသဘာပတိ ကိုယ်စားလှယ်ပေါင်း (၁၈) ဦး တက်ရောက်ပြီး ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
၂၊ ဗဟိုသဘာပတိ အစည်းအဝေးကြီးတွင် ယနေ့ဖြစ်ရှိနေသော တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းများ၏ အခြေအနေ၊ ပြည်တွင်းပြည်ပ တော်လှန်ရေးအင်အားစုများအခြေအနေ၊ နအဖ စစ်အုပ်စုအခြေအနေနှင့် မဒတ တပ်ပေါင်းစု အခြေအနေ အစရှိသည်တို့ပါဝင်သည့် နိုင်ငံရေးအစီရင်ခံစာ၊ လုပ်ငန်းအစီရင်ခံစာ၊ ဘဏ္ဍာရေးအစီရင်ခံစာများကို အကြေအလည်သုံးသပ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်၊ ထိုသို့ ဆွေးနွေး သုံးသပ်ကြပြီးနောက် ဆုံးရှုံးနေသော တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ အခွင့်အရေးများကို ဖော်ဆောင်နိုင်ရန်အတွက် အဖိနှိပ်ခံ တိုင်းရင်းသား အင်အားစုများအတွင်း ပိုမိုစုစည်းညီညွတ်စွာပူးပေါင်းလှုပ်ရှားတိုက်ပွဲဝင်သွားနိုင်ရန်နှင့် ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များကို ချမှတ်ခဲ့ပါသည်။
၃၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီတပ်ပေါင်းစုကို ပိုမိုကျစ်လစ်ခိုင်မာစေမည့် လုပ်ငန်းများ၊ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားကောင်စီ အတွင်း အဓိက ဒေါက်တိုင်ဖြစ်သော မဒတ တပ်ပေါင်းစု၏ အခန်းကဏ္ဍကို မြင့်တင်နိုင်မည့် လုပ်ငန်းများအပြင် နအဖ စစ်အုပ်စု၏ ဖိအား အမြင့်ဆုံးပေးခြင်းခံနေရသော ဘ၀တူညီနောင် လက်နက်ကိုင်အပစ်ရပ်အဖွဲ့အစည်းများနှင့်ပိုမိုနီးကပ်စွာ လက်တွဲဆောင်ရွက်သွားနိုင်ရေး လုပ်ငန်းများကို အတည်ပြုချမှတ်ခဲ့ကြပါသည်။ ထို့အတူ စစ်အာဏာသက်တမ်းရှည်ရေးကို ဦးတည်သောစစ်အုပ်စု၏ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေနှင့် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို ပြတ်သားစွာဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်တိုက်ပွဲဝင်မည့်လုပ်ငန်းစဉ်များကိုလည်း ချမှတ်ခဲ့ကြပါသည်။
၄၊ အပစ်ခတ်ရပ် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကြီးများမှ နအဖ ၏ နယ်ခြားစောင့်တပ် အသွင်ပြောင်းရေးအဆိုပြုချက်အား လက်မခံ သောရပ်တည်ချက်ကို မဒတ တပ်ပေါင်းစုမှ ဆက်လက်ပြီးအပြည့်အ၀ထောက်ခံဝန်းရံသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း နှင့် နအဖ ၏ ဖိအားပေးမှုကို နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးဖြင့် စုစည်းညီညွတ်စွာဖြင့် ဟန်ချက်ညီညီတုန့်ပြန်ရပ်တည်သွားရန် တိုက်တွန်းလိုက်ပါသည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်သော အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၏ ယနေ့ စစ်အာဏာရှင်စနစ်အား ပြတ်သားစွာဆန့်ကျင်တိုက်ပွဲဝင်နေမှုနှင့် ငြိမ်းချမ်းသည့် နည်းလမ်းဖြင့် ဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲဝင်နေမှု တို့အား တရားမျှတမှန်ကန်သည့်အတွက် မဒတ တပ်ပေါင်းစုမှ အလေးအနက်ထောက်ခံ ကြိုဆိုပါသည်။
၅၊ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတို့၏ နယ်မြေအတွင်း ထိုးစစ်ဆင်နေမှုများနှင့် အပစ်အခတ်ရပ်အဖွဲ့အစည်းများအား စစ်ရေးအရခြိမ်းခြောက်နေမှုများ ကို ချက်ချင်းရပ်တန့်ရန် နအဖ စစ်အုပ်စုအား သတိပေးတောင်းဆိုလိုက်ပါသည်။ ထိုကဲ့သိုဏ္ဍ အမျှော်အမြင်ကင်းမဲ့သည့်လုပ်ရပ်ကြောင့် ပေါ်ပေါက်လာမည့်ဆိုးကျိုးများအားလုံးသည် နအဖ စစ်အုပ်စု၏တာဝန်ပင်ဖြစ်သည်။ နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့် စစ်အာဏာရှင် ဖက်ဆစ်စစ်တပ် သည် နိုင်ငံတော်အာဏာ ကို တချိန်ချိန်တွင် လုံးဝ လက်လွတ်သွားစေရန် ပြည်သူလူထုများ၏လွတ်မြောက်မှု၊ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတို့၏ လွတ်မြောက်ရေးတိုက်ပွဲများနှင့်အတူ မဒတ တပ်ပေါင်းစု၏ လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးတိုက်ပွဲများကို အရှိန်အဟုန်မြင့် ဖော်ဆောင် သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဗဟိုသဘာပတိ အစည်းအဝေးမှ ထုတ်ပြန်ကြေငြာအပ်ပါသည်။
ဆက်သွယ်ရန် (၆၆) ၀၈၆ ၂၀၆ ၄၀၄၅။ (၆၆) ၀၈၂ ၈၈၅ ၇၉၆၃
Posted by National Democratic Front - NDF at 10:36 AM
bawhte June 16, 2010 at 8:54 AM
AsaChin national, I wholeheartedly support this alliance of Frontier area peoples. We must be brave and fierce to resist any kind of atrocities imposed on us by Burmese ultra-nationalism. For many decades, Burmese ultra-nationalists have used its military wing to achieve its supernationalism policy over Frontier nations such as Kachin, Karenni, Karen,Chin, Mon, Rakhine, Shan and it had succeeded so. Now is time to unite as one Frontier family and launch our resistance to eliminate our enemy. We have but one enemy and one goal. That is to defeat Burmese military out of our land and get independence. Together we achieve our freedom.